Raw Dyclonine HCL powder (536-43-6) hplc = 98% | AASraw
/ Products / vamwe / Dyclonine HCL upfu
Rating: SKU: 536-43-6. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukuraira kweDyclonine HCL powder (536-43-6), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwekutonga.
Dyclonine Hydrochloride ndiyo hydrochloride munyu waDyclonine, unclassified compound ine yemuno anesthetic mhedzisiro. Dyclonine inodzosera kumashure kune yakamisikidzwa sodhiyamu pane iyo neuronal membrane, nokudaro ichideredza iyo neuronal membrane kukwana kweiyo sodium ions, zvichitungamira kune yakawedzera chikumbaridzo chekunakidzwa.
Raw Dyclonine HCL anesthesia powder zvinhu Characters
Molecular Kurema: 325.87
Raw Dyclonine HCL anesthesia powder kushandiswa
Dyclonine HCL powder Mazita
Dyclonine HCL inoshandiswawo kune Dyclonine hydrochloride.
①Ukugadzirisa marwadzo eesophageal zilonda; 5-15 mL ye 0.5% dyclonine solution inogona kumedzwa sezvinorayirwa.
②Avhara maziso nemaziso kana maziso. Uyewo usapinda maitiro ekuita nzvimbo huru.
③Store pa 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) muvharo yakasimba, isina chiedza kana isingatauri.
Kuongorora & Maitiro Emishonga
① Usapa murwere chero chinhu pamuromo mukati me60 min (kusvikira kudzoka kwegag reflex) mushure mekushandisa zvinodhaka. Zvinodhaka zvinogona kupindira nechikwata chechipiri chekuedza kana chichishandiswa nemuromo.
②Test gag reflex nekunyatsoronga stroking soft palate nekotoni swab (paunenge uchibata rurimi pasi nechinodzvinyirira). Kana murwere asingachengeti kana kumedza, usapa chinhu nemuromo. Kubudirira kuita secretions sezvinodiwa kudzivirira aspiration.
Cherechedza: Aine mvura yakajeka inofanira kuva chinhu chekutanga chinomedzwa apo gag reflex inodzoka.
Murwere & Dzidzo Yemhuri
①Kutaurira kubviswa kwegag reflex nekuchengetedza kwakakodzera KUSHANDISA KUSHANDISA.
②Dzei pachipfuva paunotora ichi chirwere usingabvunzi chiremba.
Dyclonine Oral Dental Rinse inoratidzira anesthetic nenzira yekushambidza kuti varwere vanogona kutenderera vachipoteredza kweminiti imwe kune anesthetize gingival uye palatal tissue. Inobatsira pahutano varwere vanoda anesthesia asi havadi kuti iwe uiteve miromo yavo neine nhoyo yakakosha. Izvo zvataurwa kuti dyclonine inobatsira murwere ane hanya uyo anononoka panguva yaanoona.
Raw Dyclonine HCL Poda Kudzingisa
Nzira yekutenga Dyclonine HCL poda kubva kuAASraw